Shiinaha Si baaxad leh u shaqeynaya heerkulka cimri dhererkiisu yahay 12V 60Ah litir batari lithium ah oo loogu talagalay nidaamka kormeerka internetka Soo saaraha iyo Badeecada | LIAO
1. Kiiskii macdanta 12V 60Ah LiFePO4 batari nidaamka kormeerka internetka.
2. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa nidaamyada kormeerka qadka ee khadadka gudbinta shabakadda ee shabakadaha, jawiga nidaamyada kormeerka khadka tooska ah iyo nidaamyada kormeerka khadka cimilada.
Qaabka Lambar CGS-F1260N
Ugu badnaan lacag joogto ah 30A
Cabbir 200mm * 170mm * 180mm
Codsiga Naqshad gaar ah loogu talagalay nidaamka kormeerka khadka tooska ah, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa awoodda dib-u-celinta, qorraxda＆nidaamyada dabaysha, keydinta tamarta guriga, UPS, ECT.
3. Faa'iidooyinka muhiimka ah sida hoos ku xusan:
Temperature Heerkul aad u sarreeya oo heer sare ah oo adkaysi leh, heerkul ballaaran oo la heli karo oo awood u leh inuu ka hoos shaqeeyo heerkul aad u daran -40 ℃ ~ 85 ℃.
Hubso in qalabka kaladuwan ee kaladuwan ay ku shaqeeyaan 24 saacadood xaaladaha cimilada oo dhan.
Si hufan u xallisay dhibaatooyinka baytariyada acid-lead aysan awoodin inay ku shaqeeyaan heerkulka -20 ℃.
Hangzhou LIAO Technology Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare oo tamar sare ku takhasustay R&D iyo soo saarida baytariyada birta ah ee aluminium-birta ah ee aluminium-square ah. Laga soo bilaabo 2012, waxay si guul leh u soo saartay heerkul aad u hooseeya iyo iska caabin heerkul sarreysa, heerka danab ee 12V, iyo awoodda 10- Lithium birta nidaamyada tamarta korontada ee u dhexeeya 100Ah ayaa si ballaadhan loogu adeegsadaa nidaamka kormeerka khadka isgaarsiinta ee shabakadda qaran, saldhig nidaamka kormeerka khadka tooska ah, nidaamka kormeerka qadka ee deegaanka, iyo nidaamka la socodka saadaasha hawada ee saadaasha hawada.
Faa'iidada ugu caansan ee badeecaddu waa heer ballaaran oo heerkul habboon ah, oo si caadi ah loogu isticmaali karo bey'adaha qallafsan ee -40 ℃ ℃ 85 ℃, taas oo si wax ku ool ah u xallisa dhibaatada baytariyada aashitada leedhka oo aan si caadi ah ugu shaqeyn karin heerkulka hoose ee -20 digrii, taas oo hubineysa in qalabka kormeerka ee kala duwan uu shaqeeyo 24 saacadood maalintii.
Hore: 2000 + wareegga nolosha macdanta macdanta 12V 12Ah LiFePO4 ee nidaamka nalalka
Xiga: Iibinta iibka korantada badan ee la qaadan karo oo badan oo wata wax soo saarka AC iyo DC
Aaladda ABS ee korontada la qaadan karo 48 Volt 30Ah lithium pack batari